Home Wararka Farmaajo oo lagula taliyay in uu ka qaybgalo caleemasaarka Ismacil C....
Farmaajo oo lagula taliyay in uu ka qaybgalo caleemasaarka Ismacil C. Geele
Farmaajo oo markii hore diiday in uu ka qaybgalo caleemasaarka Madaxweynaha Jabuuti Ismaacil Cumar Geele ayaa hada lagula taliyay in uu ka qaybgalo caleemasaarkaas.
Farmaajo ayaa markii hore ka cagajiidaayay arintaan Laakiin dad badan oo Soomali ah ayaa ay arintaas dhibtay, isaga oo Farmaajo loo tusay in shacabka Soomaaliyeed ay ka dhiidhin doonaan ficilka noocaas ah.
Waxa isweydiin mudan sidee buu ugu fakaray in uu ka qaybgalo caleemasaarka Musaveni kii Ismaaciil Cumar Geelana uu diido. Waxaa Muuqato in Farmajo doonayo in dalka qar ka tuuro isaga oo isticmaalayo qaabkastaa oo ay ugu suuragalayso.
Lama hubo in Farmaajo qaatay talada loo soo jeediyay, waxaana macquul ah in uu halkaas u diro RW Rooble